Afhayeenka Siciid Deni Oo War yaab leh Ka Qoray Teendhada Muqdishe e lagu shirsan yahay – KHAATUMO NEWS
Afhayeenka Siciid Deni Oo War yaab leh Ka Qoray Teendhada Muqdishe e lagu shirsan yahay
Afhayeenka Madaxtooyadda maamulka Puntland Jamac Deperani ayaa Qoraal layaab leh ka sameeyay Teendhada Madaxda Soomaalidu ku shirsan tahay ee Muqdisho Afisyooni.
Qoraalkan hoos ku qoran oo jamac uga hadlaayo Afar sano kadib waxaa uu u dhigna sidan.
Teendhadu eed ma leh: Afar sano kadib iyo Afisyooni!
Markii iigu danbeysay teendhada Afisyooni waxay ahayd maalmihii Doorashadda Soomaaliya 2017-dii, oo aan halkan ka shaqeynayay maalintii doorashada iyo maalintii caleemasaarka.
Afar sano kadib waxaan dib u tegay isla teendhadii, oo Madaxweynihii lagu doortay Laguna Caleemasaaray inta wakhtiga ka dhammaaday lagu heshiisiinayo isaga iyo madaxda kale ee Soomaaliyeed, si uu u qabto doorasho.
Dareen gaar ah ayeey igu yeelatay inaan halkan dib ugusoo laabanay, waxaan dib u xasuustay wixii 4sano kahor lagu fekerayay oo ahayd in teendhadan laga gudbo oo dalka la gaarsiiyo doorasho cod iyo qof ah oo laga howlgalo isla sanadkii 2017, Balse taasi ma dhicin!
In aan halkan joogno maantana waxay si kooban inoogu sheegaysa sida loogu guuldareystay in aynu hore uga dhaqaaqno halkii aynu taagneyn Afar sano kahor.
Teendhadu eed maleh ee inaga ayaan halkeenii ka dhaqaaqin! Waxaanse rajeynaya in mustaqbalka Cashar laga barto wixii dhacay.
Previous Post: War Deg Deg Daawo:Madaxweyne Farmaajo Qodobo Cusub Ka Tanaasulay
Next Post: War Deg Deg Ah Daawo:Dekeda Garacad Oo Qarka usaaran In puntland laga Qabsado iyo ciidan Xoogan Oo puntland u Dirtay
Kkk wallee Mohamoud Saleebaan kurtimo wax iska yiri wiilka teendhada ku soo noqdoow adeerkaa Gaas ayuu jaakadda u xiri jiray adiguna Dani baad u xirtaa keligood taliyeyaal guul dareystay iga dheh
Dad la leeyahay ilaaheey ka sokoow daneheenna nooma tilmaamayo
Ninkani ra’yigiisa bunu cabiray, waana sax oo teendhada in dib loogu noqdo may ahayn, one-man-one-vote bay ahayd in lagu kala baxo, Farmaajo baa dictator iska dhigaya, iskuna kalsoonayn, meel kalena laga xukumo iyo Qatar iyo Fahad Yaasiin, adigu waxaad tahay kuwa guulwadayasha ah ee madaxda laagga ka tuura, sidii abbahaa afweyne haay haay ugu hayey hogga iyo musqusha ku riday, xiniinyo nin kale sito baa tahay, oo aan welige xoroobayn, tiisana ku meel mari karin, waa kee madaxweynaha aad ammaanaysa, wallee inaan caqli kugu jirin, heeryo nin kale side,
Kan yar wuxuu ka mid ahaa ciyaalka sheegta weriyenimada, balse aan waxba ku baran intii uu ku dhex jirey idaacadaha Puntland. Waqtigii Gaas buu iska dhigay mid la xisaabtamaya dawlada, waxa ka raacday in la xidhay oo la soo jaro baray, si uu u noqdo Awr rarey. Maanata, madaxweynihii ummadda Somaliyeed ugu nadiifsanaa ee aan tuugga ahayn buu isagoo tuug u shaqaynaya aflagaadeenayaa. Bal xagee buu eeda uu sheegayo u soo martay ileen caalamkoo dhan baa laga arkayaa kuwa halkaa soo gaadhsiiyey inaanay doorasho la gelin. Waar xishooda, oo ka xishooda birmageydada uu ugu horeeyo Farmaajo, tuug kalkaalnimo looma baahnee.